‘अमेरिकामा मानव तस्करीमा मुछ्नेले आरोप फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्छु’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
सामाजिक सञ्जालमा मैले ५० हजार डलर खर्च गरेर एनआरएनको कार्यक्रममा अमेरिकामा जान खोजेको भन्दै मेरोबारेमा जुन किसिमका अकल्पनिय समाचार प्रेसित भएका छन्, त्यस प्रति मेरो घोर आपत्तिका साथै खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । म मनोज चन्द एक आम नेपाली हुँ । गैर आवासीय नेपाली संघ एक स्थापित र गौरवान्वित संस्था हो । जुन संस्था प्रवासी नेपालीका हितका साथै नेपालीका हितका लागि स्थापित भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन होला ।
आफूमा भएको लेखन क्षमतालाई (दुई हात एकै साथ दुवै खुट्टा, दुबै कुहिनो, मुख र एकै साथ ६ वटा कलमले लेख्ने) नेपालको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म प्रदर्शन गरेर विश्वका केही मुलुकहरुमा पनि प्रदर्शन गर्ने मौका पाएको छु । उक्त कार्यक्रमहरुमा गैर आवासीय नेपाली संघबाट नै सहयोग मिल्दै आएको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । अनलाइन मिडियामा मेरोबिरुद्ध जुन कुरा प्रसारित भएको छ यसमा मेरो घोर आपत्ति छ ।
म सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ । म जस्तो मान्छेले अमेरिका जान ५० हजार डलर दिएको भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ । म कुनै पनि देशमा कार्यक्रम गर्नु पर्दा राउन्ड ट्रिप टिकटको लागि पनि स्पोन्सरको लागि अनुरोध गर्नु परेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । कला भनेको सबै मानिसमा हुन्छ र कलाको सम्मान पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । कलालकारलाई सुनियोजित ढंगबाट अनावश्यक आरोप लगाउनु आफैमा दण्डनीय काम हो भन्ने मेरो ठहर छ ।
सिधा कुरा नामको फेसबुक प्रोफाइलमा मनोज चन्दले ५० हजार डलर डा. केशव पौडेल र सोनाम लामाले बुझाएको भनेर लेखिएकोमा मेरो आपत्ती छ । म गैर अवासिय नेपाली संघ को मान्छे होइन । म भुकम्प पीडित पनि होइन । म विशिष्ट व्यक्ति पनि होइन । हुँ त म एक नेपाली जो सँग सानो लेखन क्षमता छ ।
सिधा कुरामा पोष्ट भए अनुसार भन्छु, म अमेरिका किन आउने ? जुन व्यक्तिबाट यि कुराहरु लेखिएका छन् यसमा मेरो कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । तपाई नै बस्नुस् अमेरिकामा । मलाई त मेरो देश नेपाल नै प्यारो छ । म नेपाली हुनमा गर्व पनि गर्दछु ।
बिना प्रमाण समाचार प्रकाशित गर्नु एकदमै दण्डनीय अपराध भएको मैले अनुभूति गरेको छु । यो भनेको सम्पूर्ण कलाकारहरुको र क्षमता भएका मानिसहरुको अपमान हो । सानुबाबु शिलवाल नामका व्यक्ति को हुनुहुन्छ, मैले चिन्दिन । तर उहाँले लेख्नु भएको कुराप्रति पनि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँले मेरो प्रसंग उल्लेख गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघको भेलामा मानव तस्करी भनेर लेख्नुभएको रहेछ । जसमा मेरो आपत्ति छ ।
हामी नेपाली अमेरिका त के चन्द्रमामा गएपनि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई अगाडी बढ्न नदिने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छौं भन्ने कुरा भनि राख्नु आवश्यक ठान्दिन । आफू केही गर्न नसक्ने र केहि राम्रो काम गर्ने मानिसहरुलाई विभिन्न आरोप लगाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको म खण्डन गर्न चाहान्छु ।
गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा मलाई जुन निमन्त्रणा पत्र पठाइएको छ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मलाई उपलब्ध भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोनाम लामा सरलाई आवश्यक सहयोगको लागि कल गरिएको थियो । त्यही अनुरुप उहाँले यो कुरा म गैर अवासिय नेपाली संघ अध्यक्ष समक्ष पनि राख्छु भनेर भन्नु भएको थियो र त्यहि अनुरुप मैले इमेल गरें । मैले भिसा आवेदन गर्दा कार्यक्रम हुने स्थान चाहिएको हुँदा मैले सोनाम लामा सरलाई फोन गरेको थिएँ । त्यति खेर त्यहाँ राती भईसकेको कारणले उहाँको फोन रिसिभ हुन सकेन । मैले गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको वेवसाइटमा गएर नम्बर खोजेर सचिव शंकर खड्कालाई फोन गरें । उहाँले कल रिसिभ गर्नु भयो । मैले भिसा फर्मका लागि ठेगाना मागें । उहाँले एकैछिनपछि इमेल गर्नुभयो । त्यसै राती मैले उहाँसँग कुराकानी गरें । उहाँले मलाई पठाइएको निमन्त्रणापत्र माग्नुभयो । काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासलाई विशेष अनुरोध पठाउने भन्दै निमन्त्रणापत्रको कपी माग्नुभएकाले मैले उहाँलाई पठाइदिएँ ।
मलाई त सोनाम सरले राम्रोसँग चिन्नु पनि भाको छैन । तर कुरा रह्यो एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष केशव पौडेल सरको । उहाँसँग त मेरो भेटघाटसम्म भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोधमा मलाई उक्त पत्र पठाउनु भएको थियो ।
आफूमा भएको क्षमतालाई संसार भरी प्रदर्शन गर्ने अभियानमा अमेरिकामा प्रदर्शन गर्नु मेरो लागि ठूलो उपलब्धी थियो । तर सुनियोजित ढंगबाट जसरी मलाई ५० हजार डलर दिएको कुरा र लिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् , यस्ता अनावश्यक कुरा बोल्ने मान्छेले उक्त कुरा फिर्ता नलिएमा अदालतसम्म जाने चेतावनी दिन चाहन्छु । स्मरण रहोस्, आदरणीय अध्यक्ष केशव पौडेल र संयोजक सोनाम लामालाई जुन किसिमको मानव तस्करीको अभियोग लगाइएको छ र म माथि अनावश्यक आरोप लगाइएको छ, यो सरासर गलत हो । तसर्थ यसको जिम्मा एनआरएन अमेरिकाका सचिव शंकर खड्काजी र सिधा कुराले लिनु पर्ने मेरो धारणा छ ।
जुन निमन्त्रणापत्र मैले शंकर सरलाई पठाएको थिए त्यहि पत्र सिधा कुरा लगायत सामाजिक सञ्जालमा आउनुको रहस्य बारे पनि स्पष्ट गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । आफूमा रहेको क्षमतालाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रदर्शन गरी नेपाल र नेपालीको नामलाई उच्च स्थानमा राख्ने एक अभियानकर्तालाई गैर अवासिय नेपाली संघको सहयोग जहिले पनि आवश्यक रहने भएको हुँदा यस्ता अनावश्यक कुराको पछि नलाग्नु हुन प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।